Maraykanka oo ka hortagay Duulaankii Al Shabaab ee Puntland? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Maraykanka oo ka hortagay Duulaankii Al Shabaab ee Puntland?
Jimcihii lasoo dhaafay oo ku beegnayd 12kii Oktoober ayey diyaaradaha Maraykanka duqeyn aan horey loo arag ku qaadeen xeebta magaalada Xarardheere oo ay isku aruursanayeen tiro badan oo ah dagaalyahanada Al Shabaab.
Duqeyntii todobaadkii hore oo xog dheeraad ah laga helayo ayaa sheegaya inay ka qeyb qaateen ugu yaraan labo diyaaradood oo ah nooca Drone-ka, arrintaasi oo muujineysa baaxada duqeyntaasi oo ah tii ugu weyneyd oo ay in muddo ah Maraykanka la beegsadaan nawaaxiga Xarardheere.
Maraykanka ayaa warkii uu asbuucan kasoo saaray duqeyntaasi ku sheegay in ay ku dhinteen in ka badan 60 dagaalyahan, balse tirada dhimashada ayaa la sheegayaa inay intaasi ka badan tahay oo ay gaareyso boqolaal sida ay sheegayaan xogta laga helayo dadka deegaanka.
Bartilmaameedka duqeyntan ayaa ahaa saldhig ay Al shabaab ku leedahay waqooyiga degmada Xarardheere oo ah halka ay horey kooxdaasi ugu aruursay maleeshiyaadkii duulaanka dhanka bada kusoo qaaday Puntland sanadkii 2016.
11kii bishii hore ee September ayey ahayd markii ay Horseed Media wax ka qortay abaabulka Al Shabaab ka waday Xarardheere iyo koonfurta Gobalka Mudug oo la sheegay inuu ku wajahanaa dhinaca Puntland, [Halkan ka akhriso warbixintaasi.]
Maraykanka ayaa la sheegay inuu isha ku hayey dhaq dhaqaaqa ka socday Xarardheere, isla markaana duqeyntiisan ku beegay xili sirdoonkooda uu aaminsanaa in maleeshiyaadkaasi isu diyaarinayeen inay deegaankaasi ka dhaqaaqaan, waxaana jirta xog sheegaysa in qaarkood ay sugayeen doonyo.
Maamulka Galmudug ayaa sidoo kale la sheegay in cadaadis kasoo wajahay dhinaca Maraykanka oo ku cadaadiyey maamulkaasi inuu qaado tilaabooyin uu uga hortagayo abaabulka Al Shabaab ka waday degmada Xarardheere oo hoostagta maamulkaasi.